को हुन एसपी कार्की ? जसले हिरासतमा राखे सांसद ‘मनाङ्गे’ – Tandav News
को हुन एसपी कार्की ? जसले हिरासतमा राखे सांसद ‘मनाङ्गे’
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ माघ ११ गते शनिबार ११:०४ मा प्रकाशित
प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेदेखी नै उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरी अधिकृतको लिस्टमा नाम कायम राख्न सफल रहेका प्रहरी अधिकृत हुन दानबहादुर कार्की । कमाण्ड, कन्ट्रोल र अनुसन्धानमा अब्बल मानिएका एसपी कार्की जहाँ गए त्यहाँ आफ्नो अलग छाप बनाउँछन् ।
२०५४ साल चैत्र २८ गते इन्स्पेक्टरमा भर्ती हुँदा होस् या डिएसपीमा बढुवा हुँदा, उनी एक नम्बरमा थिए । एसपीमा बढुवा हुँदा उनीमाथी अन्याय भएको भनेर प्रहरी संगठनमा चर्को अलोचना भएको थियो । एसपी कार्कीले जुन ठाँउमा कमाण्ड गरे त्यो ठाँउमा गरेका केही नोटिसेबल कामहरु :
केपी ओलीको त्यो स्कर्टिङ…
२०७३ सालमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) को मेची–महाकाली अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत राजविराजस्थित गजेन्द्रजारायण सिँह औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजना गरेको कार्यक्रम विथोल्न प्रयास भएपछि गोली चल्यो । घटनामा ४ जनाको मृत्य भयो । आक्रोसित भिडले एमालेका शर्षि नेताहरुमाथी आक्रमण गर्न खोजेका थिए ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका नेताहरुको स्कर्टिङको जिम्ममा त्यो बेला यिनै एसपी कार्कीले पाएका थिए । सप्तरी जिल्लामा उनी डिएसपीको रुपमा कार्यरत थिए । घटनाले डर लाग्दो रुप लिइरहेका बेला यिनै कार्कीले प्रम ओली लगायतका शीर्ष नेतालाई घटना स्थलबाट सुरक्षा दिएर वाहिर निकाल्न सफल भएका हुन् । कार्कीको नाम लिँदै काठमाडौ आएपछि ओली प्रशंसा समेत गरेका थिए ।
भण्डारी दम्पती हत्या प्रकरण सफल अनुसन्धान
बुटवलमा एक व्यवसायी दम्पतीको हत्या घटनाको एसपी कार्कीले सफल अनुसन्धान गरेका थिए । २०६७ साल असार ९ गते व्यवसायी रमेश भण्डारी र श्रीमती आशा भण्डारीको बुटवल जेसिस चोकस्थित विष्णु भण्डारी स्टोर्समा गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
घटनामा संलग्न निमप्रसाद थापा, भोलेबाबा भन्ने शम्भु गौतम, पुरन श्रीस, श्याम प्रसाद विक, राजु गलामी, अर्जुन गौतम र कृष्ण गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ गरि रुपन्देही जिल्ला अदालत पेश गरिएको थियो ।
दुगडमाथी मुद्दा चलाए
महानगरिय प्रहरी बृत बानेश्वरमा डिएसपी हुँदा कार्कीले दुगड समुहलाई मुद्दा चलाए । नाकाबन्दीको बेला धारा तेलमा कालोबजारी गरेको भेटिएपछि उनले मुद्दा चलाएका हुन् । कार्कीलाई दुगड समुहबाट पाँच करोडको अफर आउँदा समेत इन्कार गरेर कानुनी दायारामा ल्याएका थिए । उक्त काण्डमा त्यो बेला अख्तियारको उच्च पदाधिकारीबाट मुद्दा नचलाउन दवाव आएपनि हक्की स्वभावका कार्की, पछि हटेनन् ।
उत्कृष्ट काम गर्ने अधिकृत मध्येका एक कार्की
कास्की सुरुवा आउनु भन्दा अघि कार्कीले उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै पुरस्कृत भए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै कार्कीसहित ५ जना प्रहरी अधिकृतलाई पुरस्कृत गरेको हो ।
पुरस्कृत हुनेमा कार्कीसहित एसपी मुकुन्द मरासिनी, चन्द्रकुवेर खापुङ्ग, डिएसपी ऋषिराम कँडेल र इन्स्पेक्टर गोविन्द पन्थी रहेका छन् । संगठनको निति निर्देशन शतप्रतिशत पालना गरेको र प्रशासनिक कुशलता प्रदर्शन गरेको भन्दै उनीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
प्रहरीमाथी जाई लाग्ने लागु औषध कारोवारीलाई गोली चल्यो
एसपी कार्की पोखरा सरुवा भएको केही दिनमै एक लागुऔषध कारोवारी पोखरा–१० उत्तम चोकका गोविन्द थापामाथी गोली चल्यो । थापालाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीमाथीनै जाई लागेपछि प्रहरीले गोली हानेको हो । एसपी कार्की भएकै हुनाले प्रहरीको मनोवल बढेको हो ।
सांसद दिपक मनाङ्गेलाई पक्राउ गरे
सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे सांसद हुनु अघि त उनलाई पक्राउ गर्न केही प्रहरी अधिकृत डराउथे । अब त उनीसँग पदको शक्ति पनि छ । पत्रकार सम्मेलनमै मान्छे कुट्नु पर्छ प्रहरीले के गर्छ ? भनेर कानुनलाई नै चुनौति दिए ।
गल्ती गरेर पनि स्वीकार गरे, त्यतिमात्र होइन उजुरी पनि पर्दा उल्टो दम्भ देखाएपछि कास्की प्रहरीले पक्राउ गर्ने तयारीमा जुट्यो । कास्कीका एसपी कार्कीकै आँटले सांसद दीपक मनाङगेलाई पक्राउ गरेर २ दिनको म्याद थपी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । जुन कुरा गतिलो नजिर बनेको छ ।
E-paper: Shrawan 28, 2075